ယောသပ်သည် Kenedy - အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေသလုံး - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ပုံရိပ်တွေ: ယောသပ်သည် Kenedy
သူကတစ်ဦးဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေသလုံးဖြစ်ပြီးသူခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများအနေဖြင့်လူဦးတွေ့ဆုံချစ်တော်မူ၏။ သူကဘူလ်ဂေးရီးယားနဲ့မေတ္တာ၌တည်ရှိ၏, သူမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ Bansko အခြေချဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။
'' မနာလိုသောခြေသလုံး '- ငါကလူသူ့ကိုမသိရသကဲ့သို့ငါ၏နောက်နေ့ဧည့်သည်ယောသပ်ကို Kenedy သို့မဟုတ်သင်မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ယောသပ်ကိုသာ 26-နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သူပြီးသားသူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စများဖြေရှင်းရေးနှင့်အတူအများအပြားဖောက်သည်ကူညီပေးသည်ရှိရာတစ်ဦးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီပိုင်ဆိုင်သည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုခရီးသွားလာနေစဉ်အွန်လိုင်းအလုပ်လုပ်ယခုအချိန်တွင်မှာမိမိဦးစားပေးကြသည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာအကြောင်းကိုရှုထောကသူ့အမှတ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်သူနှင့်အတူတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း, တည်နေရာလွတ်လပ်သောအလုပ်လုပ်, ခရီးသွားလာသူဤမျှလောက်ဘူလ်ဂေးရီးယားချစ်သောသူအကြောင်းပြချက်ဖတ်နိုင်သည်။
ဟယ်လို။ ငါ့နာမကိုယောသပ်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ 26-နှစ်ရှိပြီဖြစ်၏နဲ့ကျွန်မယခုနှစ်များစွာအဘို့အကြှနျုပျ၏အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားလာခြင်းနှင့်အပြေးပါပြီ။ ငါဒေသခံလူနေမှုပုံစံစတဲ့စူးစမ်းကြည့်ဖို့ကဒီမှာ Plovdiv အတွက်ဖြစ်၏။ ငါတကယ်ဘူလ်ဂေးရီးယားကိုချစ်။ ယခုတိုငျအောငျ, ငါဆိုဖီယာနှင့် Bansko မှပါပြီ။ ငါကဒီနေရာကိုသည်ကြီးထင်ပါတယ်။
ငါနည်းလမ်းများစွာ၌ဤလူနေမှုပုံစံစတဲ့ငါ့ကိုရှေးခယျြခဲ့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မတက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ့ရသောအခါ, ပထမဦးဆုံးအလုပ်ငါသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုမ္ပဏီ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနအတွက်အဝေးမှတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်တယ်။ ဒါဟာငါသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍမှ၌ငါ့စျေးကွက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာအများစုစုဝေးစေသောဤအလုပ်ကနေဖြစ်ခဲ့သည်။2လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီစတင်ပါရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ငါအွန်လိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်နှင့် ပိုပြီးသွားလာဒါကြောင့်အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများကိုသင်ယူနှင့် ပို. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လူတွေကိုဖြည့်ဆည်း။ ငါသည်ငါ့ပုံးစာရင်းထဲကအမှုအရာမှထွက်ကူးနှင့်ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ချင်တယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ထက်ပို 30 နိုင်ငံများအတွက်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ငါမှစတင်ခဲ့ အဝေးမှအလုပ်မလုပ် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ခွဲအတွင်း4။ ထိုကာလ၌ငါအထဲတွင်ကြီးမားသောဆင့်ကဲမြင်ကြပြီ။ အဲဒီအချိန်တုန်းကဒီလုပ်နေတာအခြားလူကိုရှာဖွေရန်အလွန်ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ယခုအားဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်လျက်နေရာတိုင်းဖြစ်ကြသည်။ ဒီခရီးစဉ်တွင်ငါအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကြောင်းလမ်းနထေိုငျသူမြားကိုအနည်းဆုံး 15 လူတွေတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကြပါပြီ - ကမ္ဘာ့ခရီးသွားနေချိန်မှာသူတို့လက်ပ်တော့ကနေအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ငါအင်တာနက်ကငွေရှာဖို့နဲ့သင်ယူဖို့နှင့်ကွန်ယက်အားအခွင့်အလမ်းများကိုအပြည့်အဝထိုကဲ့သို့သောရိုင်းအရပ်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ငါကြိုးစားသူကိုဖန်တီးမှုဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒရှိသူသည်ဘယ်သူ့ကိုမှ, Hard-အလုပ်လုပ်နှင့်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်များနှင့်စွန့်စားနီးပါးဘာမှပြီးမြောက်နိုင်သည်ကိုယုံကြည်ကြသည်။
နောက်တစ်ပတ်ငါဘူခါရက်နှင့်ရိုမေးနီးယားသွားငါဘော်လကန်ပေါ်ငါ့အဘို့နောက်ဆုံးဦးတည်ရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကနောက်ဆုံးတဦးတည်း, ငါ၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ခဲ့ပေမယ့်သေချာဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုနောက်ငါမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူအချို့သောအချိန်ဖြုန်းဖို့ခရစ္စမတ်နေရာဖြစ်သည်သွားနေပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ၌ငါစပိန်မှရွေ့လျားပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ငါနေဆဲအတိအကျငါဖြစ်မယ့်ငါရှိရာအတော်လေးသေချာမဖွစျ၏။ ဒါဟာဗလင်စီယာသို့မဟုတ် Tenerife ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါဧပြီလသို့မဟုတ်မေလတဖန်ငါ Bansko သွားရောက်ကြည့်ရှုမည်ကိုတောင်ပေါ်တချို့အချိန်ဖြုန်းသည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါ၏အပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်မှာတော့အစားအစာကြီးလှ၏။ သင်တို့သည်အမဲသားကိုမပယ်မရှားပါဘူးဆိုရင်တောင်သင်ဆဲအရသာအစားအစာ၏ကြီးမားသောရှေးခယျြမှုရှိသည်။ လတ်ဆတ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေအများကြီးနဲ့သင်ဒီမှာမဝယ်နိုင်သောအော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ စပျစ်ရည်ကိုအလွန်ကောင်းသောနှင့် Bakeries လည်းအံ့သြဖွယ်လတ်ဆတ်တဲ့မုန့်နှင့် pastries ထုတ်လုပ်ရန်။ တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါဘော်လကန်ကျော် Bakeries ကောင်းပါတယ်ထင်ပေမယ့်ဘော့စနီးယားနှင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားလတ်ဆတ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာတစ်ခုခုစားရန်အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးသောအရပ်တို့ကိုဖြစ်ကြသည်။ ငါတကယ် rakia လိုပဲ။ အကြှနျုပျအဘို့ကိုအကောင်းဆုံးများထဲမှခကျြရဲ့ Krushovitsa ဖြစ်ပါတယ်။
ဘူလ်ဂေးရီးယား အပြုသဘောကလူစင်စစ်ဖြစ်ကြသည်။ ယခုတွင်ငါသည်နေဖြင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကြပါပြီလူများအပေါင်းတို့သည်ဒါဧညျ့ငါ့ကိုဆီသို့ဦးတည်ရွေကြပြီ။ အဆိုပါခရီးစဉ်ကောင်လေးထံမှတည်းခိုခန်းမန်နေဂျာမှ - လူတိုင်းကအရမ်းကြင်နာပြီးကြိုဆိုပွဲဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
သင့်အနေဖြင့်ကျော်ကြား Camino က de စန်တီယာဂိုလမ်းလမ်းလျှောက်ကြုံတွေ့ကြသည်။ သင့်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်သင်သည်ထိုခရီးမှတဆင့်သင်ယူထားသောသင်ခန်းစာများမျှဝေပါ?
ဤသည်အလွန်ကောင်းသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ငါ Camino ငါတကယ်လုပ်ခဲ့တယ်မတိုင်မီတစ်နှစ်လုပ်ပေးချင်တယ်။ ငါသည်လည်းထိုသို့ပြုမှလိုချင်သူတစ်ဦးစေတနာ့ဝန်ထမ်းစီမံကိန်းအပေါ်အခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ခရီးစဉ်ကိုသူ့ဟာသူစီစဉ်တစ်နှစ်နေခဲ့ရသည်။
ကျနော်တို့အတူတူစတင်ကျနော်တို့စုစုပေါင်း 8 လူမျိုး၏အုပ်စုတစုခဲ့ကြသည်ကိုအားလုံးအတူတူပင်နှစ်အရွယ်တွင်နှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးတဦးတည်းကြီးမားသောမိသားစုအဖြစ်အတူတကွမှီဝဲ။ ကျနော်တို့ကလမ်းလျှောက်ခဲ့တယျနေချိန်မှာငါတကယ်, မိသားစုနှင့်ရပ်ရွာ၏ဤခိုင်မာတဲ့အသိကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Camino ရှင်းပြဖို့ခဲယဉ်းသည်။ သင်ပြင်ပမှရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင် - သင်ရုံတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့လမ်းလျှောက်နေကြသည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့သင်အမှန်တကယ်ရတဲ့နေကြတယ်, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလူတွေကိုတွေ့ဆုံတွေ့ကြုံခံစားရန်အခွင့်အလမ်း, သူတို့ထဲကအတော်များများသူတို့ကိုယ်သူတို့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရှိမယ့်, ထိုသူအချို့တို့သည်မိမိတို့၏အသက်တာ၏မေတ္တာကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြလိမ့်မယ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ယေဘုယျအားဖြင့်မိမိတို့၏အသက်တာ၌ပျောက်ဆုံးခံစားရနေသည် သူတို့ထဲကအတော်များများလည်းကိုယ့်ကိုအခြားသူများဘာသာရေးအကြောင်းပြချက်မှထွက်သွား, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုထိုသို့လုပ်နေတာ။ ငါထွက်ရှင်းလင်းရန်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအမှုအရာရှိခဲ့ပါတယ်။ သင်, စဉ်းစားရန်အချိန်တွေအများကြီးရှိသည်ရာသီဥတုကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်သင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်းလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ ငါ2ရက်သတ္တပတ်ငါအရာအားလုံးကိုဆက်ဆံထင်ပါတယ်။ ငါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပုံပြင်များနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်လူရာပေါင်းများစွာတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
'' အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ Mag 'ရန်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမက်ဆေ့ခ်ျကိုအဘယျသို့ဖြစ်ပါ့မလား
ငါ့ဇာတ်လမ်းဝေမျှခွင့်များအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သငျသညျအခြို့သောကြောက်မက်ဘွယ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာ၌ခန့်ထားပြီနဲ့ အကြီးအဆောင်းပါးများ.
ငါသည်သင်တို့ကလုပ်နေတာဆက်လက်အလိုရှိ၏။ သူတို့ရဲ့ပုံပြင်များမျှဝေဖို့ဆန္ဒရှိနေသောထိုအကောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့လူတွေကိုရှာဖွေတာကိုစောင့်ရှောက်, သင့်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်နှင့်သင့် network ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ နှင့်အခြားလူများလာအောင်နှိုးဆွခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်ရန်သူတို့ကိုအသုံးပြုပါ။
လိုက် ယောသပ်သည် Kenedy - Facebook ပေါ်မှာမနာလိုသောခြေသလုံး
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေသလုံး, အလွတ်, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ခရီးသွား | 22-02-2019 | rating:5/ 30